Synaps: mpandefa fampiharana GNOME Do-style fa haingana kokoa | Avy amin'ny Linux
Synaps: mpandefa fampiharana GNOME Do-style fa haingana kokoa
Synaps dia fampiharana amin'ny fombany Gnome-do o varahina. Ankoatra ny hafainganam-pandeha mahavariana mihazakazaka izy io, marihina fa ity programa ity, tsy toy ny Gnome-Do lasa amin'ny fiteny vala, so tsy mila ny fivarotam-boky mono. Ankoatr'izay, manana ny mampiavaka azy rehetra fikarohana manatanteraka azy ireo amin'ny fampiasana Zeitgeist.
Ny fampiharana dia efa manana lohahevitra maromaro hanovana ny fisehony. Ilay hitanao etsy ambany dia ny lohahevitra "mini", fa misy maromaro hafa azo alaina.
Ny plugins izay Synapse dia manana:
Fampiharana - tadiavo ireo rakitra ao amin'ny solosainao
Banshee - avela hilalao / hametahana rakitra mozika ao Banshee
Didy - ampandehano ny baiko rehetra (Ohatra: "sudo apt-get update")
Devhelp - mitadiava antontan-taratasy amin'ny fampiasana Devhelp
Rakibolana - mitadiava famaritana teny
Fikarohana lahatahiry - ahafahana manokatra lahatahiry fampiasa matetika
Fivoriana Gnome - fidirana, fikatsoana, famerenana amin'ny laoniny
Fikarohana Hybrid - valin'ny fikarohana feno nomen'i Zeitgeist
Rhythmbox - mamela ny hilalao / hametahana rakitra mozika ao amin'ny Rhythmbox
UPower - mampiato sy mampiato andro ny solosainao
Zeitgeist - mitady izay rehetra hitan'i Zeitgeist
Mila manampy fotsiny ny tahiry PPA ianao:
sudo apt-get dist-upgrade # ity dingana ity dia tsy ilaina afa-tsy ao amin'ny Ubuntu Lucid
sudo apt-mahazo mametraka synaps
Synaps dia ho hita ao amin'ny Fampiharana> Fitaovana. Mba hanombohana azy dia tsindrio ny bikan'ny habaka CTRL +.
Fanamarihana: hanovana ny toe-javatra Synaps, kitiho ny faribolana kely izay miseho eo an-tampon'ny zana-baravaran'ny Synaps. Mba hisehoan'ity efijery ity dia tsy maintsy apetrakao aloha ny fitambarana fanalahidy izay mandefa azy (CTRL + habaka habaka no tonga tampoka)
loharanom-baovao: WebUpd8 & Ubunlog & Fiainana Ubuntu
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Synaps: mpandefa fampiharana GNOME Do-style fa haingana kokoa
Te hisaotra anao aho amin'ity famakiana mahafinaritra ity!
! Tena tiako izany rehetra izany. Nomeko marika ianao mba hijerena ireo zavatra vaovao apetrakao…
Tsidiho ihany koa ny tranokalako; kitapo ivelany
Fdgf dia hoy izy:
Misarika ny saiko izany, heveriko fa hanandrana azy rahampitso 🙂
Mamaly an'i Fdgf
Focojano dia hoy izy:
Ha ha yeah, mamaly ahy haingana kokoa noho i Gnome izy.
Tiako ny manavaka ny sokajy sy ny hoditr'izy ireo.
Fampiharana tena tsara.
Valio i Focojano
Tsara noho Gnome?.
Ho azo atao ve izany?
Tsy maintsy manandrana isika, izao dia hanao izany aho.
Tsy mianatra avy amin'ny fikarohana toa an'i Gnome-do io.
Saingy antsipiriany izy ireo izay azo antoka fa hihatsara amin'ny fanavaozana ho avy.
Hom118 dia hoy izy:
Ahoana no ahazoako mamaky ireo antontan-taratasy avy amin'ny fizarazarana hafa noho ilay iray lehibe
Fanontaniana tsara izany. Ny marina dia tsy haiko ... fa azoko an-tsaina fa tsy Synaps no mila alamina fa Zeitgeist. Ampahafantaro ahy raha mahita ny fomba hamahana ity olana ity ianao.
Richard Stallman: "WikiLeaks dia fomba fanoherana ny fanjakana mankahala ny fahalalahantsika"
Indikator-VirtualBox na ny fomba fandefasana milina virtoaly nefa tsy manokatra VirtualBox